Uhlelo lokuhlonipha omama besizwe eKZN | IOL Isolezwe
Uhlelo lokuhlonipha omama besizwe eKZN
Isolezwe / 26 July 2012, 10:53am / BONGIWE ZUMA
UNKK Sizakele maKhumalo Zuma ozohambela umcimbi woku-thula ngokusemthe-thweni uhlelo lwezindondo zomama besizwe eThekwini ngenyanga ezayo. Isithombe: BONGIWE MCHUNU
UNKK Sizakele maKhumalo Zuma ozohambela umcimbi woku-thula ngokusemthe-thweni uhlelo lwezindondo zomama besizwe eThekwini ngenyanga ezayo
ISIFUNDAZWE iKwaZulu-Natal sizoba nohlelo lwezindondo zokuqala ngqa ngonyaka ozayo zokuhlonipha omama besizwe ngeqhaza abalibambile ukuthuthukisa imiphakathi eyahlukene.
Lezi zindondo ezibizwa nge-Africa First Ladies Awards (AFLA) ezihlelwe ngokubambisana yizinhlangano ezimbili kulesi sifundazwe okuyi-Vuka Afrika neMzansi Marketing zizoba ngenyanga yabesifazane u-Agasti.
Kuthiwa inhloso enkulu ukukhuthaza omama besizwe okubalwa kubo amakhosikazi kaMengameli, okaNdunankulu, oNdlunkulu, aweziMeya kanjalo nawabeFundisi ukuba baqhubeke nokubambisana nemiphakathi yangakubo ukuthuthukisa isifundazwe naleli lizwe.
Imikhakha okuzobhekwa kuyo kubalwa owezolimo, owezempilo, owezemfundo, ezamabhizinisi, amathuba emisebenzi, ukuqeda indlala neminye bese beklonyeliswa ngokubheka indima esebeyidlalile.
Omunye wabagqugquzeli be-AFLA uNksz Phumza Mpaka, uthe lo mcimbi wezindodo uzoba khona minyaka yonke kodwa okwamanje ngoba usaqalwa, uzogxila esifundazweni iKwaZulu-Natal nokuzothi uma kuhamba iminyaka kuqokwe kuhlanganiswe omama bazozonke izifundazwe zakuleli.
“Lo mcimbi wezindodo uzoqinisa ubudlelwano nakomama bebodwa bakwazi ukupotshozelana ngolwazi.
Kodwa okusemqoka kakhulu ukubakhuthaza nalabo abangakaqali ukusebenzisana nemiphakathi ukuba basukume bazithathe ukuze liqhakambiswe neqhaza labo ngokuletha ushintsho ikakhulu ezindaweni zasemakhaya,” kusho uPhumza.
Kuthiwa amakhosikazi kaMengameli awazuqokwa umkanye ngeqhaza lawo kodwa minyaka yonke kuzoba khona eyodwa ezohlonishwa ngendondo.
Uma usuvuthiwe lo mcimbi kuzokwandiswa isibalo salabo mama kufakwe nabasemazweni angomakhelwane ukuqinisa ubudlelwano nokubakhuthaza.
UNkk Sizakele maKhumalo Zuma nguyena ozohamba phambili ngonyaka ozayo kwazise iqhaza lakhe liyabonakala njengoba elima nomame baseNkandla benza imisebenzi abangasayikhuthalele abesimame abaningi.
Umcimbi walezi zindondo uzothulwa ngokusemthethweni ngenyanga ezayo eDurban City Hall mhlaka-17 ngehora lesithupha.
UNkk MaKhumalo Zuma uzobe ekhona naye sekuthulwa lo mcimbi.
Imiphakathi nayo izonikezwa ithuba lokuba ivotele labo omama okuyibona abanegalelo elikhulu uma sekusondele umcimbi omkhulu wezindondo ngonyaka ozayo.